Home > safarka Europe > Meesha ay yaalliin Matxafka Best In Europe
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 27/11/2020)
museum kale ee Netherlands, ah museum kitaabiga ah waxa uu ku yaalaa Amsterdam. Waa mid ka mid ah matxafyada ugu fiican Yurub haddii aad rabto in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah wax ku bartaan. Booqashada Bijbels ka caawisaa inay fahmaan muhiimadda iyo saamaynta Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan bulshada Holland. Waxaa shaki la'aan waa museum gaar ah, iyo sidoo kale-ku haboon kuwa jecel diinta taariikhda.
Kunsthistorisches Museum waa matxafka-wanaagsan ee loo yaqaan tahay in Austria, sidoo kale loo yaqaan Museum of Fine Arts. Qaar ka mid ah qaab ay ugu caansan waxaa ka mid ah shuqullada Rembrandt, Michelangelo, Raphael, iyo Rubens. Waxay ku noqotay wax lala yaabo fanka caashaqsan farshaxan qurux badan tan iyo furitaankiisii 1891. Qof kasta oo booqanaya Vienna tareen waa inuu sameeyaa qabanqaabo si loo arko Matxafka Kunsthistorisches.
Dadka socdaalaya la kids, waxa aanu ka heli wax kasta oo wanaagsan yahay MACHmit Children Museum Germany. Haddii aad ku jirto Berlin, xaqiiji si aad u hubiso soo baxay MACHmit iyo kala duwan soo jiidashada. Waxay ku haboon ee dadka waaweyn waa sida si fiican u, hawlo badan oo xiiso leh sida shaybaarka farshaxan, workshop print, iyo midii fuulitaanka.
Skansen Open Air-Museum, Stockholm, Sweden
#matxafyada #traveleurope europetravel eurotrip museum safarka travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands traveltips